बुटवलमा मृत्यु भएकाको कोरोना रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ – Sadarline
बुटवल : बुटवलको ‘कोरोना विशेष’ अस्थायी अस्पतालमा आइतवार मृत्यु भएका युवकमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ । युवकको दुई पटकको कोरोना संक्रमण परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको अस्थायी अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिए ।
पाल्पा रिब्दीकोट स्थायी घर भई बुटवल सैनामैना ४ सिसौडाडा बस्ने ३४ वर्षका बाबुराम थापा क्षेत्रीको दोस्रो स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट सोमवार दिउँसो आएको हो । ‘पहिलो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि हामीले शंका लागेर दोस्रो पटक परीक्षणका लागि पठाएका थियौं। तर, दोस्रो रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आयो’ डा. थापाले भने । ती युवकको स्वाब अस्पताल भर्ना भएको चौथो दिन मात्रै परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौं पठाइएको थियो ।
शनिबारसम्म थापाको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेकोमा आइतबार बिहान श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको र दिउँसो एक बजे थापाको मृत्यु भएको थियो । दुबईमा ट्याक्सी चालक रहेका थापा त्यहाँबाट ६ गते त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौं उत्रिएका र चैत ७ गते बसबाट सैनामैना आएका थिए ।
थापालाई ज्वरो आएपछि स्थानीय आचार्य मेडिकलमा जँचाएर औषधि सेवन गरेकामा निको नभएपछि चैत १३ गते बेलुका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आएका थिए । त्यहाँ सामान्य जाँचपछि बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । मृतक थापाका एक श्रीमती र दुई छोरा छन् । थापाको शव अस्पतालमै रहेको छ । अनलाइनखबरबाट
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज : नेपालगञ्जसँग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती बजार रुपईडिहामा दुई सय नेपाली अलपत्र परेका छन् । भारतको बिभिन्न स्थानबाट सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका दुई सय नेपालीहरु सिमा नाका बन्द गरिएकाले भारतीय क्षेत्र रुपईडिहामा अलपत्र परेका हुन् । पत्रकार सन्तोष शुक्लाका अनुसार भारतीय सशस्त्र सीमा बलमार्फत नेपाली अधिकारीहरुको समन्वयमा नेपाल ल्याउने प्रयास […]
४ असार २०७६, बुधबार २०:१७